स्त’न माड्दा महिलालाई के–के हुन्छ ? - e-Sidha Nepal
हाम्रो संवाददाता ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:५२
काठमाडौं । महिलाहरुले आफुलाई फिट राख्नको लागि अनेक मेहनत गर्छन । महिलाहरु आफू सुन्दर हुनका लागि ब्युटिपार्लर जान्छन् । फेसियल, स्क्रब र विभिन्न खाले अनेक उपाय अपनाउँछन् । आफ्नो स्वास्थ्यको लागी महिलाहरु जिम जाने, योगा गर्ने र स्वस्थ खाना खान्छन् । तर, आफ्नो स्त’नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन । स्त’न मसाजमात्रै यौ’न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ ।
के शारीरिक सुखभोगका बेला महिलाको स्ख’लन हुन्छन् ?
कोरोनापछिको लकडाउनले परिवार नियोजनका साधन नपाउँदा आफुलाई सम्हाल्न र जोगाउँन गाह्रो भो
महिलालाई यौ न चाहना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला !